Olee otú Idozi Kaadị ebe nchekwa Format Error
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> otú ndozi Kaadị ebe nchekwa Format Error
Ẹkeme Naghachi Data mgbe Kaadị ebe nchekwa Format Error
Nke a ụtụtụ mgbe m nwara emeghe m 2GB Micro SD kaadị site na kọmputa site na data USB, ya kwuru m kaadị mkpa-Ị. Ma mgbe m kpebiri usoro ya, na ihuenyo gwara m m kaadị-apụghị ghọtara. Mgbe ahụ m na-na-anata format njehie ozi. M ga-atụfu niile data na m na kaadị ebe nchekwa? Biko nyere m aka ka m data azụ. Daalụ nke ukwuu.
Kaadị ebe nchekwa format njehie itịbe ruru ọtụtụ ihe, dị ka usoro njehie, na-ezighị ezi mmadụ arụmọrụ, virus ọrịa, wdg Ọ bụrụ na gị na kaadị encounters kaadị ebe nchekwa format njehie, biko kwụsị iji ya ozugbo na adịghị agbalị usoro ya. Gị nwere ike omume naghachi data mgbe kaadị ebe nchekwa format njehie ka ogologo dị ka data na ọ bụghị na a overwritten.
Idozi kaadị ebe nchekwa format njehie ma ọ bụ naghachi data si kaadị, ị nwere ike na-agbalị iji a-atọ ndị ọzọ mgbake usoro. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị otú ahụ a na kaadị ebe nchekwa format njehie data mgbake omume n'ihi na ị na-agbake data si formatted ma ọ bụ merụọ kaadị ebe nchekwa na ala. Ọ naputa a nso nke faịlụ formats si gị errored kaadị ebe nchekwa, gụnyere music, ihe oyiyi, videos, akwụkwọ na ndị ọzọ. Ihe ize ndụ-free na mfe na-eji atụmatụ nke usoro ihe omume-eme ka ọ nhọrọ kasị mma n'ihi na ị na-agbake data mgbe kaadị ebe nchekwa format njehie. Ugbu ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ụdị nile nke kaadị ebe nchekwa dị ka SD kaadị, Micro SD kaadị, CF kaadị, MMC kaadị, wdg
Download ikpe mbipute idozi kaadị ebe nchekwa format njehie ugbu a!
Idozi Kaadị ebe nchekwa Format Error na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Ọ bụ ezie na kaadị ebe nchekwa gị nwere ike gaghị emeghe, biko na jikọọ na ya na gị na kọmputa na-eme ka n'aka na ọ nwere ike gosiri dị ka a disk na disk management.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite na kaadị ebe nchekwa format njehie data mgbake
Wụnye na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery omume na kọmputa gị, ị ga-ahụ a window dị ka ndị na.
Idozi kaadị ebe nchekwa format njehie, ị pụrụ "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị errored kaadị ebe nchekwa
Ebe a nke usoro ihe omume window ga-egosi niile partitions na kọmputa gị, gụnyere kaadị ebe nchekwa gị. Ị nwere ike họrọ kaadị gị na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu faịlụ na ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data mgbe kaadị ebe nchekwa format njehie
Mgbe scanning, niile natara data na gị errored kaadị ebe nchekwa ga-emere na "File Ụdị" na "ụzọ" edemede. Ị nwere ike ele mbụ faịlụ aha ma ọ bụ preview foto ego olee otú ọtụtụ n'ime faịlụ nwere ike natara site gị errored kaadị ebe nchekwa.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji akara faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site na Windows Vista
USB nkebi Iweghachite: Olee naghachi USB nkebi
Best ngwọta naghachi data site na kaadị ebe nchekwa
Esi ọcha Kaadị ebe nchekwa-adịgide adịgide na Kaadị Shredder
Mfe nzọụkwụ ịrụ a DDR kaadị ebe nchekwa mgbake